Baarlamaanka oo kulmaya, kana hadlaya Miisaaniydd Dowladda 2013-2014 | KEYDMEDIA ONLINE
Baarlamaanka oo kulmaya, kana hadlaya Miisaaniydd Dowladda 2013-2014
Muqdisho (KON) - Labo Maalin kadib markii lagu dilay Muqdisho Xildhibaan, midkalena lagu dhaawacay ayaa Maanta waxaa dib u furmaya Kulanka Baarlamanka Soomaaliya.
Xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud oo ah Xogheynta Guddiga Xeer-hoosaadka Anshaxa iyo Xasaanada ee Baarlamaanka oo la hadlay Radio Muqdisho, ayaa sheegay in Kulanka Maanta ay Xildhibaanada uga doodi doonan xisaabxirka dowladda ee 2013-2014.
“Xildhibanda waxa ay kaga doodi doonaan Kulnkooda Maanta Warqado ay ku qoran yihiin Xisaab-xirka Xukuumadda 2013 oo uu soo gudbiyay Gudiga Maaliyadda ee Baarlamaanka, waxaana ay ka dhiiban doonaan Ra’yigooda, haddii uu Waqtiga ogolaadana way ansixin doonaan ama way diidi doonaan,” ayuu yiri Xildhibaanka.
Kahor inta uusan xirmin Kala-fadhiga 4-aad ee Baarlamaanka, waxaa lagu wadaa Xildhibaanada in ay go'aan ka gaaraan Labo Ajandre oo kala ah Miisaaniyadda & Xeerka Doorashada 2016, oo ay soo gudbiyeen Gudiyadda Arrimahaasi u qaabilsan.
Amaanka Xildhibaanada, ayaa noqonaya mid sii xumaanaya marba marka ka danbysa oo waxaa si isdab joog ah loogu qaarijinyaa Gudaha Caasimadda, iyadoo Xukuumadda Soomaaliya ay horey u balan qaaday in Illaalo gaar ah u samayn doonto Xildhibaan kasta.